शालिकराम आत्महत्याको रहस्य
शालिकराम पुडासैनीले भरतपुर, चितवनको कंगारु होटलमा आत्महत्या नगरेको भए नारायणगढवासीले ‘यति विशाल प्रदर्शन’ देख्न पाउने थिएनन् । प्रदर्शन साँच्चै विशाल थियो । हिजो थियो, आज छ, कहिलेसम्म रहन्छ ? थाह छैन । स्थानीय प्रशासनले २०२८ सालमा बनेको ऐन अनुसार “नारायणगढ बजारको पूर्वमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको चोकदेखि घरेलु कार्यालयको चोकसम्म, पश्चिममा सप्तकोशी अस्पताल चोकदेखि चौबिस कोठी चोकसम्म, उत्तरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयदेखि भरतपुर अस्पताल, पुरानो मेडिकल कलेज जाने चोक, नारायणी मावि चोक, कृषि ज्ञान केन्द्र हुँदै चौबीस कोठी चोक र दक्षिणमा घरेलु कार्यालयको चोकदेखि दूरसञ्चार चोक हुँदै सप्तगण्डकी अस्पताल चोक” सम्म निशेधाज्ञा लगाएको छ ।
देशका जनता जागेर सडकमा ओर्लिएका बेला शान्ति स्थापनाका लागि उपायहरुको अवलम्वन गर्नु नै सही प्रशासनिक कार्य हो । यो कुरामा स्थानीय प्रशासन चुकेको छैन । अहिले स्थानीय प्रशासनले के गर्यो र के गरेन भनेर मीन–मेख निकाल्ने समय पनि होइन । शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि प्रशासनले पाँचजना भन्दा बढी मानिससँगै हिँडन पनि मनाही गरेछ ।
देशका जनता जागेर सडकमा ओर्लिएका बेला शान्ति स्थापनाका लागि उपायहरुको अवलम्वन गर्नु नै सही प्रशासनिक कार्य हो ।
कुरा प्रहरी प्रशासन र न्यायपालिकाको परिसकेपछि स्थानीय प्रशासनले के गरोस् ! अदालत पुगेको एकघण्टामा त ‘उडन छू’ भै हालिन्छ भनेर सोच्ने भी.आइ.पी. अभियुक्तहरु जब दशदिनसम्म भरतपुर प्रहरीको बन्दीगृहमा राखिए तब स्थानीय प्रशासन बडो दिकदारीमा पर्यो । यो कहाँको झ्याउलो आइलाग्यो ! स्थानीय प्रशासन अहिलेसम्म संघीय सरकारकै मातहतमा छन । शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा प्रादेशिक सरकारले पाउने भए स्थानीय प्रशासनलाई हाइसन्चो हुन्थ्यो । केही रचनात्मक, केही सकारात्मक पाटो उद्घाटित हुन पाउने थियो स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीहरुको । मुख्य कुरो, सीडीओ साहेबको दिमागमा अभियुक्तहरुको रेखाचित्र बन्ने नै थिएन । के भन्नु र सीडीओ साहेबले !
सामाजिक सञ्जालसँग अभ्यस्त भएका भलादमीहरु बडो उत्साहकासाथ २०६२/६३ को जन–आन्दोलनको पुनरावृत्ति हुन लागेको अनुमान गर्दै आफनो स्टेटस अपडेट गर्दैछन् । उनीहरुको विचारमा, नेपालमा हरेक दश बर्षमा परिवर्तन हुने गरेको छ । अहिले त्यही हुन लागेको हो । शालिकराम त बहानामात्र हो कि जस्तो लाग्दो रहेछ मानिसलाई । नभए, भरतपुर चौकीमा थुनिएका तीन ‘सेलिब्रिटी’ अभियुक्तलाई भेट्न किन डिला संग्रौला जस्तो सेलिब्रिटी सांसद, श्वेता खडका जस्तो सेलिब्रिटी अभिनेत्री र कलाकारहरुको समुदाय त्यहाँ पुग्ने थिए र ? किन कांग्रेसजस्तो राजनीतिक पार्टीले आफनो छायाँ सरकारका मन्त्रीहरु मध्येका एकलाई त्यति टाढा चितवनसम्म पठाइरहन्थ्यो यो गर्मीको मौसममा ।
तर, पठायो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफनो संवेदनशील चरित्र देखाइ हाले । ‘कहाँ त्यत्रो अठार बीस वर्षसम्म अमेरिकामा काम गरेर आएको मानिस । कसरी बस्ला त्यो पुलिसको खोरमा ! मलाई त थाह छ नि, म त गिरिजा बाबुकै पालामा गृहमन्त्री भै सकेको मान्छे । पुलिसको हिरासत कस्तो हुन्छ भन्ने त मलाई पो थाह छ त ।’ सभापति देउवाले माननीय छायाँ गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई आदेश दिए, ‘ल बडुजी । गएर उनीहरुको हालत र हविगत बुझेर आउनु होला । रिपोर्ट गच्छदार उप सभापतिजीलाई बुझाउनु भए हुन्छ ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफनो संवेदनशील चरित्र देखाइ हाले । ‘कहाँ त्यत्रो अठार बीस वर्षसम्म अमेरिकामा काम गरेर आएको मानिस । कसरी बस्ला त्यो पुलिसको खोरमा ! मलाई त थाह छ नि, म त गिरिजा बाबुकै पालामा गृहमन्त्री भै सकेको मान्छे ।
बिगत दश दिनदेखि देश ठप्प नै छ त नभनौं, डिष्टर्ब छ । महत्वपूर्ण घटनाहरु छायाँमा परेका छन् । भारतका महामहिम विदेशमन्त्री एस जयशंकर आए नेपालको अत्यन्त जरुरी भ्रमणमा । त्यो भ्रमणले सामाजिक सञ्जालमा कुश्ती खेल्नै पाएन । अर्कोतिर, त्यति जरुरी भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश मन्त्रीसँग नेपालका महामहिम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘सिंगल’–‘सिंगल’ भेटने मौका नै पाएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एस जयशंकरलाई देख्ने बित्तिकै हात समातेर तान्दै गोप्य कोठाभित्र लगी हाले । त्यसपछि १ घण्टा १० मिनटसम्म आफै कुरा गरे, एक्लै ।
उता महामहिम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीजी हेरेको हेरेकै भए । जयशंकरसँग ज्ञवालीजीको भेट हूलमूलमा भयो । हूलमूलभन्दा बाहिर एक्लाएक्लै भेटको मौका मिलाउनै सकेनन् स्मार्ट मन्त्रीजीले । राजकाजमा यस्तै हुन्छ भनेर चित्त बुझाए । महामहिम विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग एक्ला–एक्लै भेटन नपाएकोमा महामहिम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पटक्कै दुःखी थिएनन् । नेपाल–भारतको जटिल मामिलामा ‘श्रध्देय’ पार्टी अध्यक्षज्यू तथा ‘सम्माननीय’ प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै सबै समाधानमूलक कुरा भएपछि महामहिम परराष्ट्रमन्त्रीजीले किन त्यो सानो चित्त दुखाएर हिंडनु पर्यो र ।
आत्महत्या गरेका शालिकराम पुडासैनीकृत चितवनको घना भीडभाड, प्रदर्शन र नारा–जुलुशले स्वयं प्रम ओलीको स्वास्थ्यलाई पनि छायाँमा पारेको हो । भर्खरै सिंगापुरबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर नेपाल छिरेका प्रम ओली चौबीस दिनपनि देशमा बस्न पाएनन् । उनी छिरेको साता दिनमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सिंगापुर गई हाले ।
आत्महत्या गरेका शालिकराम पुडासैनीकृत चितवनको घना भीडभाड, प्रदर्शन र नारा–जुलुशले स्वयं प्रम ओलीको स्वास्थ्यलाई पनि छायाँमा पारेको हो ।
तै, उनले ‘सहायक’ झैं रहेका अध्यक्ष पुष्पकमललाई कार्यकारीको पत्र थमाउन भ्याई हाले । कार्यकारी पाएका पुष्पकमल दंगदास परे । उनी सक्रिय हुन थालेको खबर आयो । तर वास्तवमा उनी सक्रिय हुन थालेका हुन कि छटपटाउन थालेका हुन् ? भन्न सकिँदैन । प्रम ओलीको कृपाले पाएको कार्यकारीको टोपी लगाएर पुष्पकमल राष्ट्रपति विद्यादेवीलाई पनि भेट्न गए । कसैले प्रश्न सोध्यो, ‘राजनीतिक दलका नेताहरु सेरेमोनियल राष्ट्रपतिसँग किन राजनीतिक कुरा गर्दछन् ?’ कसैले जवाफ दियो, ‘पुरानो एमालेभित्रको राजनीति हो यो । यसमा कसैले विवाद गर्नु ठीक छैन ।’
भीडभाड र कोलाहलका बीच यो कुरा कसैले सुनेन । सामाजिक सञ्जालमा पनि कसैले लेखेन ।
‘प्रम ओली – बाई बाई ’ हो कि होइन । नारायणीको किनारामा यस्तो नारा पनि लाग्यो रे । भीडले राजा आऊ देश बचाऊ टाइपका नारा लगाउन थालेपछि धेरै गणतन्त्रवादी प्रदर्शनमा हिंडेनन् रे । आत्मामा निर्दलीय पञ्चायत बोकेका २०४६ चैत अघिका पञ्चहरु २०७६ मा आएर मसान झैं जागेको कुरा सुनाउनेहरुको पनि कमी भएन । त्यसो पनि हुन सक्ला । आखिर यो देश कुनै आधुनिक देश त होइन नै !
भीडले राजा आऊ देश बचाऊ टाइपका नारा लगाउन थालेपछि धेरै गणतन्त्रवादी प्रदर्शनमा हिंडेनन् रे ।
परापूर्वकालदेखि नै किचकन्ने र ख्याकहरु प्रेम सुत्रमा बाँधिएको कथा कथ्ने र रोचक हिसावले सुन्ने सुनाउने देश हो । आगामी पर्यटन बर्षमा मन्त्री योगेश भट्टराईले जामुना गुभाजुको आत्मा बोलाउन सकेभने पर्यटकहरु त कति आउने छन् कति । त्यसमा पनि, अब अहिलेको मौसम राम्रै छ देशमा ।
शालिकराम पुडासैनीको आत्माको के हुने हो कसैलाई थाह छैन । केस टाढा दर्ता भएको छ । अहिलेका अभियुक्तले छुटेको पाँच मिनेटमा साँच्चिकै अभियुक्त पत्ता लगाउने आश्वासन पाएकी छिन् रे सांसद डिला संग्रौलाले । खोई, त्यो त के कसो हो थाह भएन । हुनसक्छ, शालिकरामलाई आत्महत्याको लागि दुरुत्साहित गर्ने स्वयं शालिकराम नै हुन् । उनी मरी सके । मूर्दासँग बयान लिन मिलेन ।
चितवनको स्थानीय प्रशासन पक्कैपनि रनभुल्लमा परेको छ । यता काठमाडौंको स्थानीय प्रशासन बडो शोख र मोजमा छ । उसले शालिकराम विवादमा हात हाल्नु परेको छैन । नजिकको मण्डलामा भीड जम्मा नभएसम्म उसलाई विवादमा हात हाल्ने खाँचो पनि छैन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, ९ भदौ २०७६, १८:१५:००